कोरोनाको दोस्रो लहरबाट संक्रमित बिरामी कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ?
काठमाडौं– कोरोना भाइरसले अहिले संसारलाई नै आफ्नो चपेटामा पारेको छ ।अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा यसको महामारी दिन प्रतिदिन तिव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
भारतका अस्पतालमा आएसीयू बेड र अक्सीजनको कमी पनि ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको छ ।नेपालमा पनि बिस्तारै त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुने संकेतहरु देखा परिसेका छन् ।
दोस्रो लहरको कोरोना स्वरुपका कारण साससंग सम्बन्धित धेरै समस्याहरु देखिन थालेका छन् ।यद्यपि वरिष्ठ चिकित्सकहरुले सबै कोरोनाका विरामीलाई अक्सीजन थेरापी दिनु आवश्यक छैन भनिसकेका छन् ।त्यसैले अक्सीजन सेचुरेशनसंगै विरामीले कस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जाने भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
अक्सीजन सेचुरेशन भनेको के हो ?
अक्सीजन सेचुरेशन भनेको फोक्सो र शरीरको सम्पूर्ण अंगसम्म जाने रगतको अक्सीजेनेटेड हेमोग्लोबिनको स्तर हो, जुन प्रतिशतमा पत्ता लगाइन्छ । यसले शरीरको फङ्सनलाई राम्रो किसिमले चलाउन सहयोग गर्छ । रीडिङमा यसको स्तर ९४ भन्दा धेरै छ भने खतराभन्दा बाहिर भएको संकेत हो । डाक्टरका अनुसार कोरोना हुँदा शरीरमा अक्सीजनको तिव्र गतिमा कमी आउँछ ।
विशेषज्ञका अनुसार एसपीओ २ को स्तर ९४ देखि १०० बीच हुनु भनेको हामी स्वास्थ छौं भन्ने संकेत हो । त्यस्तै ९४ भन्दा तल झऱ्यो भने यो हाइपोक्सेमियालाई निशाना लगाउन सक्छ । जसका कारण विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ । यदि अक्सीजेनेटेड हेमोग्लोबिनको स्तर लगातार ९० भन्दा तल झरिरह्यो भने त्यसलाई खतराको घण्टि भन्ने बुझ्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त मेडिकल सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।
इन्टेन्सिभ अक्सीजन सपोर्ट
सास फुल्ने,छाती दुख्ने,सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरु शरीरमा अक्सीजन प्रभावित हुने संकेत हुन् । केही विरामीमा अक्सीजन स्तर अचानक झर्नाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनको समस्या हुन सक्छ र सम्पूर्ण अंग र नियमित फङुननमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्छ । शरीरमा अक्सीजनको कमी र सासमा समस्यालाई एउटा हदसम्म घरमा प्रभावकारी ढंगबाट रोक्न सकिन्छ । जसका लागि हस्पिटलाइजेशनको आवश्यकता पर्दैन । धेरै गम्भीर स्थिति भयो भने मात्र विरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्छ ।
९१ भन्दा तल अक्सीजन
यदि शरीरमा अक्सीजन ९५ भन्दा माथि छ भने आत्तिनु पर्दैन । यदि अक्सीजनको स्तर ९१ देखि ९४ छ भने त्यसलाई लगातार जाच गरिरहन आवश्यक छ । तर यदि अक्सीजन स्तर १ देखि २ घण्टासम्म लगातार ९१ भन्दा तल झरेको छ भने तुरुन्त मेडिकल सहायता लिनु आवश्यक छ ।
अनुहार र ओठको रंग
कोरोना भाइरसका सामान्य लक्षणप्रति प्रायस् सबै जना जागरुक छन्, तर यसमा लुकेका धेरै लक्षण पनि छन्, जसलाई ध्यान दिइरहेका हुँदैनौं । ओठमा नीलो र अनुहारबाट अचानक रंग उड्नु जस्ता लक्षण पनि देखिन्छ । छाला अथवा ओठ अचानक नीलो हुनु स्यानोसिसको पहिचान हो । रगतमा अक्सीजनको कमी हुदा यस्तो समस्या हुन्छ । स्वास्थ अक्सीजेनेटेड ब्लडबाट हाम्रो छालालाई रातो र गुलाफी देखिन्छ त्यसैले अक्सीजन कम हुदा यस प्रकारको लक्षण देखिन्छ ।
छाती अथवा फोक्सोको दुखाई
कोरोनाका विरामीमा अक्सीजनको स्तर अचानक झर्नु खतरनाक हुन सक्छ । यो क्रममा यदि छाति दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छातिमा दवाव,लगातार खोकि,छटपट र धेरै टाउको दुख्यो भने डाक्टरको सहयोगको आवश्यकत पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा तुरुन्त भर्ना हुन तयार हुन पर्छ ।
दिमागमा रगत सञ्चारमा कमी
रगतमा अक्सीजनको कमी दिमागसम्म पुऱ्याउने रगतको फ्लोलाई पनि प्रभावित गर्छ । यसको साथै त्यस्ता विभिन्न कोर ब्लड भेसेल्स पनि प्रभावित हुन्छन्, जसले न्यूरोलजिकल फङ्शनलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यस्तो हुँदा विरामीलाई कन्फ्यूजन हुने, रिंगटा लाग्ने, बेहोश हुने, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने र भिजुअल डिसअर्डरसंग सम्बन्धित समस्या पनि हुन सक्छ ।
बाफ लिनाले कोरोना नष्ट हुने र सास फेर्न पनि राहत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि दावी गरिएको छ ।त्यसका लागि मानिसहरु पानीमा विभिन्न किसिमका तेल मिसाएर बाफ लिन्छन् ।
यद्यपि स्वास्थ विशेषज्ञका अनुसार यस कुराका कुनै वैज्ञानिक प्रमाण भने छैन । स्वास्थ विशेषज्ञ भन्छन् –‘लगातार बाफ लिनाले घाँटि र फोक्सोबीचको नलीलाई नोक्सान पुग्न सक्छ, जसले कोरोनाको लक्षणलाई झन् धेरै गम्भीर बनाउन सक्छ ।’
यसबाहेक केही भाइरल पोस्टमा फोक्सोका लागि ज्वानो र कपूरले सास फेर्न गाह्रो हुनेलाई राहत हुन्छ भनेर उपाय दिइएको छ ।तर घरमा यस प्रकारका प्रयोग गर्नबाट बच्नु पर्छ ।
यस्ता कुराको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।स्रोत कलाकर्मी बाट
२०७८ बैशाख १४, मंगलवार ०१:२८0Minutes 67 Views